Fakafaka: Iray ny ray, tokana ny reny ! | NewsMada
Ny fandikana befahatany ny teny vahiny sy ny fanakarana anjambany ny fomba fiheveran’izy ireny zavatra na tranga iray na maro no anisan’ny mamotika haingana ny teny malagasy. Tanàna mpirahavavy, hono! Fa iza no niteraka ireo tanàna lazaina fa mpirahavavy? Manan-dray sa manan-dreny ireo no lazaina fa mpirahavavy? Rehefa tsy takatry ny sain’ny sasany io fomba fihevitra vahiny io, hanaovan’izy ireo fandikan-teny peta-toko indray ny sehatra isan-karazany. Ny haka tahaka vahiny no mibahana sy mahamaika azy ireny fa tsy ilay fanomezan-kasina ny teny malagasy amin’ny alalan’ny fanajana ny foto-piforonana lalina tsy itambaran’ny Malagasy na amin’iza na amin’iza… Vokatr’io findramana foto-piforonana vahiny io, nanjary niteraka olona antapitrisa maro ny “reny”!
Tsy ny famoahana voambolana sy ny dikan-teny vaovao ihany no mahamaika fa ny fanitsiana ny tahaka io tranga io. Mila omena vahana any amin’ny sehatra isan-tsokajiny ny fanarenana mba tsy sanatria efa lasa lalina sy mahazo faka vao hitadiavam-pangady. Tsikaritra fa efa manomboka tafatsofoka any amin’ny zavakanto sy ny kolontsaina ary ny fomba malagasy sasany mantsy ny fampiasana azy ireny ka sao sanatria hanamaivana na hamotika ny teny sy ny fomba fisainana malagasy nolovaina tamin’ny teo aloha.
Mitaky fandraisana andraikitra avy amin’ny tsirairay ny fanitsiana. Anisan’ny manana anjara andraikitra goavana be amin’izany ny haino vaky jery (hainovakijery). Tsy tokony ho re any amin’ny Radio, na ho voavaky any anaty gazety ary hita sy heno any amin’ny televiziona intsony ny “tanàna mpirahavavy”, “mirahalahy mianaka”, sns.
… Tsy nanalavitra ny lamina voajanahary ny seha-piforonan-teny (anisan’izany ny anaran-javatra na olona, fomba filazan-javatra na tranga iray…). Noho izany, azo lavina marindrano avy hatrany ny mifanohitra amin’izany. Mety hanatsotra ny teny malagasy io, saingy rehefa tena dinihina tsara, mirakitra zava-dalina sy saropady ny teny malagasy.